Tantaran'ny orinasa - Anping County Ansheng Wire Meshes Product Co., Ltd.
Anping County Ansheng Wire Meshes Product Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1996 avy amin'i chen shun feng,
Tamin'ny 1996, fivarotana fitaovana kely tao Guangzhou izy io, ary harato varahina sy harato vy tsy misy fangarony no tena manao azy
Tamin'ny 1998,nanangana sampana fikarohana nikela bolongana ny orinasa. Ho an'ny nickel harato, nampidirina lafaoro fandrakofana roa sy lafaoro karazana tsara nampiana, atrikasa fametahana nikela vaovao, ary milina fanenomana tariby. Masinina miisa 11 an'ny milina fanenomana any Alemana no nampidirina mba hanamboatra sarina tariby, harato ary fanodinana lalina. Rafitra famokarana mifangaro.
Tamin'ny taona 2000, nanangana trano fananganana orinasa 20 000m2 ao Anping ny orinasa, nanamboatra famolavolana, fanodinana, fanaraha-maso kalitao, fonosana ary famaranana, trano fanatobiana entana ary departemanta hafa hanitarana ny faritry ny birao.
Tamin'ny 2001 ka hatramin'ny 2005, nanangana atrikasa vaovao epoxy harato sy atrikasa vy vy harato ny orinasa, ary nahatratra 100 tapitrisa ny varotra fanondranana isan-taona.
2005-2010 Ilay atrikasa dia novaina ho atrikasa tsy misy vovoka misy loko resin epoxy
2010-2015 miaraka amin'ny mpanjifa alemanina dia namolavola fantsom-boaloboka sy andian-doha totohondry, andian-tsarimihetsika boatin-tsarimihetsika automotive.
Tamin'ny 2016, Niorina ny Office Shijiazhuang,
Amin'ny 2017, ny departemanta fanodinana lalina tariby dia natsangana mba hiditra amin'ny indostrian'ny filtrika polymer plastika, indostrian'ny extrusion plastika, milina fantsom-bozaka alemanina, milina fanapahana laser, ary fitomboan'ny fahaizan'ny fandefasana entana ary ny toky momba ny kalitao.
Amin'ny taona 2018, ny fampiroboroboana ireo singa manivana vovoka amin'ny indostria plastika sy ny fampiroboroboana ireo singa sivana mivalona dia napetraka.
Amin'ny 2019, ny sampana fanadiovan-drano sy fanadiovan-drano dia natsangana mba hampivelatra ny rafitry ny sivana fototra manitatra andalana harato.